I-Villa enolwandle yabucala kunye namachibi
I-villa eyodwa ekhululekileyo enencasa entle kwaye ixhotyiswe ngayo yonke intuthuzelo ebekwe kwilali yokuhlala elwandle, malunga neekhilomitha ezi-2 ukusuka kumbindi wePorto Recanati, kunye neenkonzo ezininzi ezibandakanya ulwandle lwabucala kunye namachibi okuqubha.
Indlu inegadi enkulu, ivaranda enefenitshala, ipatio ene-awning yombane yelanga, ishawa eshushu, isinki, indawo yomlilo kunye nekona yokutyela.
Egadini indawo yokupaka.
INDAWO YOKULALA IYATHOBELA IZIKHOKELO ZIKA-AIRBNB ZOKUCOCWA NOKUBULAWA NGESIBULWANA OKUNXA KUSASAZELWE yi-COVID 1.
Iminyango emibini ivulelwa kwigadi ebiyelwe ngokupheleleyo, ekhokelela kwiveranda enekona yokuphumla (iTV) kunye nendawo yokutyela enezixhobo.
Ekungeneni igumbi lokuhlala elikhulu (i-TV) enendawo yokutyela, ikhitshi, kunye nefriji, ifriji, i-dishwasher kunye nomatshini we-nespresso, ojongene ngqo ne-patio yangaphakathi (i-TV) apho ungadla khona kwaye upheke ngaphandle. Kwindawo yokuhlala kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini (iTV) kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Kwindawo yokulala kukho igumbi lokulala elikhulu kakhulu eliphindwe kabini (i-TV) kunye negumbi lokulala elinamawele (iTV), zombini zisetyenziswa yigumbi lokuhlambela lesibini elineshawa. Kwi-patio, enokuthi igqunywe nge-awning yombane yelanga, umnyango ovula indawo yokuhlamba impahla / igumbi lokugcina.
Ukungena kwidolophana kuvunyelwe kuphela kwabo banekhadi lamagnetic eliya kuhanjiswa kunye nezitshixo zendlu; ikhadi likwavumela nokungena kumadama okuqubha. Indawo yokungena elalini inomntu ohamba ngeenyawo.Ukufikelela elunxwemeni kwenzeka ngokuthe ngqo ukusuka ngaphakathi elalini ngendlela yabahambi ngeenyawo. Unxweme oluhle lwegrabile, olugcinwe kwaye lujongwe, luxhotyiswe ngeeshawa kunye namagumbi okutshintsha kwaye axhotyiswe ngezixhobo eziyimfuneko kubantu abakhubazekileyo; kwindawo yeendwendwe: iambrela, ibhedi yelanga, isitulo somgangatho kunye nesitulo somlawuli.
Kukho amadama amabini anobukho bomlindi, elinye likhulu kwaye elinye lincinci kwaye lincinci kubantwana.
Inkundla yentenetya kunye nenkundla yebhola ekhatywayo yabantu abahlanu kufuneka ibhukishwe kwangethuba.. Iindwendwe nazo zingathatha ithuba lebhola ekhatywayo eluhlaza. Ngaphakathi kwilali kukho indawo yokudlala yabantwana abancinci, ibha / indawo yokutyela.
Izikhokelo, amaphecana, iincwadana kunye namakhadi oshishino eendawo zokupheka okanye umdla wabakhenkethi ziyafumaneka kwiindwendwe endlwini. Ukungakwazi ukubakho njengoko ndihlala kwesinye isixeko, ndiphathise indlu kunye nokhathalelo lweendwendwe zam kuBenedetta, umamkeli wam endisebenza naye oyonwabela yonke intembeko yam. Iya kuba nguye oya kukhangela kwaye akunike naluphi na ulwazi oluluncedo lokuhlala kwakho ongalibalekiyo.
Izikhokelo, amaphecana, iincwadana kunye namakhadi oshishino eendawo zokupheka okanye umdla wabakhenkethi ziyafumaneka kwiindwendwe endlwini. Ukungakwazi ukubakho njengoko ndihlala…